Tag: Kugonesa Kugonesa | Martech Zone
Tag: Kutengesa Kunogonesa
Svondo, Kukadzi 28, 2021 Svondo, Kukadzi 28, 2021 Douglas Karr
Kana mabhizinesi ari kuongorora yavo yekutengesa fanera, izvo zvavari kuyedza kuita ndezvekunzwisisa chikamu chimwe nechimwe murwendo rwevatengi kuti vaone nzira dzavanogona kuzadzikisa zvinhu zviviri: Saizi - Kana kushambadzira kuchikwezva mamwe tarisiro saka zvine musoro kuti mikana kuti vakure bhizinesi ravo rinowedzera zvichipiwa kuti mitengo yekutendeuka inoramba yakatsiga. Mune mamwe mazwi… kana ini ndikwezva chiuru chemamwe tarisiro nechiziviso uye ndine 1,000% shanduko
China, Gumiguru 8, 2020 China, Gumiguru 8, 2020 Douglas Karr
Iyo yakawanda CRM uye yekutengesa inogonesa mapuratifomu muindasitiri inoda kubatanidzwa, kuwiriranisa, uye manejimendi. Iko kune yakanyanya kutadza chiyero mukutora kwemidziyo iyi nekuti inokanganisa sangano rako, yakawanda yenguva inoda varairidzi uye vanogadzira kuti zvese zvishande. Pasina kutaura iyo yekuwedzera nguva inodikanwa mukupinda kwedata uye ipapo zvishoma kana kushaya njere kana nzwisiso murwendo rwezvaunotarisira uye vatengi. Freshsales iri
Anopfuura makore gumi apfuura, ndakashanda netarenda risingadaviriki muindasitiri yeSawaS - kusanganisira kushanda semaneja wechigadzirwa weScott McCorkle uye makore mazhinji semubatsiri wezano achishanda naDave Duke. Scott aive mugadziri asingaregi aikwanisa kusvetuka pamusoro pechero dambudziko. Dave aive anoshandura anoshandura account maneja uyo akabatsira masangano makuru epasirese kuona kuti zvavaitarisira zvapfuura. Hazvishamise kuti vaviri vakabatana,
Mediafly: End-To-End Kugonesa Kugonesa uye Zvemukati Management
Chipiri, Gunyana 15, 2020 China, Gumiguru 1, 2020 Douglas Karr
Carson Conent, CEO weMediafly, akagovana chinyorwa chakakura chakapindura mubvunzo uyu, Chii Chinotengeswa Chekuita? kana zvasvika pakutsvaga uye kutsvaga yekutengesa yekudyidzana chikuva. Tsanangudzo yeSales Engagement ndeiyi: Maitiro, anoenderera mberi anoshongedzera vese vatengi-vakatarisana nevashandi nekwaniso yekugara uye zvakarongeka vane hurukuro yakakosha neyakagadzika yevatengi vanobata padanho rega rega revatengi-kugadzirisa matambudziko ehupenyu kutenderera kudzoka kwe